Canarias jiri FDCAN kwado ego oru ngo oru ohuru 90 | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
A ga-eji nde 228 nke Canary Islands Fdcan mee ihe na oru ngo 90
Tomas Bigordà | | Bayam, Ike ikuku, Ike ikuku, ike hydraulic, Ike Igwe fotovoltaic, Kwes ike anyanwụ, Ike imeghari ohuru
N'ihi Canary Islands Development Fund, FDCAN, karịa Ọrụ 90 iji melite njikwa ike nke ndị ọchịchị na mahadum na kansụl gosipụtara, ga-enweta ego nke nde euro 228.
Gọọmentị nke Canary Islands ekwuola na ọrụ ndị a nzube na-abawanye el eji ume ohuru, meziwanye ike ike ma zụlite njem na-adigide, iji mejuputa ụdị ike kwesịrị ekwesị karị na Canary Islands.
1 Islands Canary
1.7 Gwè ahụ
Maazị Fernando Clavijo, onye isi oche nke Canary Islands ugbu a ekwuola na nkwupụta na n'ókèala dị ka Canary Islands Ọ dị mkpa ịkwalite ọrụ ndị na-enye ohere iji kwalite ike nchekwa na arụmọrụ, belata ụgwọ ma nwee ọganihu na mmepe nke ụdị ịsọ asọmpi na asọmpi.
Clavijo weere na Canary Islands nwere ọnọdụ eke zuru oke, nke na-enye ohere ịkwalite mmepe nke mmeghari ohuru, ọ bụghị naanị ịkwaga na mgbanwe nke ụdị ike, kamakwa dị ka ọrụ iji gbasaa akụ na ụba nke agwaetiti, ma si otú a mee ka GDP ha dị elu.
Ọrụ dị iche iche nke gọọmentị mpaghara kwadebere iji nweta ego n'aka FDCAN gụnyere ọtụtụ omume na usoro iji belata mmụba siri ike na ọkụ eletrik, na-ebelata ịdabere na Fosil fuels na CO2 anwuru, yana mmụba dị arọ nke ihe ndị na-emegharị emegharị na ngwakọta ike.
Ke adianade do, ọtụtụ omume e zubere metụtara imeziwanye ihe ike ịrụ ọrụ ma na-adigide ma na-agagharị agagharị, site n'ụzọ ndị na-adịghị emetọ emetọ.
Gọọmentị na-egosi na n'ime Fuerteventura ga-amalite ọrụ ọkụ eletrik nke anụ ụlọ site na ume zuru oke, ejikọghị na netwọk ahụ.
A ga-eme ka ọkụ ọha na eze nwee ume site na ume ọhụrụ na mpaghara dị iche iche nke agwaetiti ahụ, na mgbakwunye na ịkwalite oriri onwe onye na ụlọ ọha na mweghachi.
En Gran Canaria, Cabildo na-ahụ, n'etiti omume ndị ọzọ, ntinye nke ikuku ikuku na ntinye fotovoltaic n'ọtụtụ osisi na mmiri ọgwụ, usoro nke ikuku ifufe atọ ma ọ bụ ntinye nke osisi fotovoltaic na ụlọ yana ọkụ ọkụ ọha na eze na teknụzụ LED na ntinye. nke ịgbanye isi ihe nke ụgbọ ala eletrik.
Initiativezọ ọzọ bụ nke Mahadum nke Las Palmas de Gran Canaria, Nke a ga - eme ihe anọ iji meziwanye arụmọrụ ike site na itinye ego na ọkụ na akpaaka ụlọ, na -emezi akụrụngwa ndị gbara ya gburugburu na ụlọ. Na mgbakwunye na mmegharị na mmegharị nke nrụnye eletriki na ụlọ isii.
Ndị Cabildo de Tenerife na-atụ aro omume R + D + i na usoro ntuziaka banyere mmiri na aquifers; nchịkọta ume na njikwa ibu iji belata oriri na ITER; usoro ikuku ikuku di elu nke na-eme ka D-Alix Datacenter dị jụụ ma ọ bụ na-amụ banyere ikike nke ikuku mmiri nke agwaetiti iji nweta ọkụ eletrik na iji ọkụ.
Ebumnuche nke teknụzụ na ume ọhụrụ ike na atụmatụ iji belata ike ike na ụlọ ọha na ndịda ọdịda anyanwụ nke agwaetiti a na-ezubekwa.
En La GomeraA ga-etinye usoro ndị dị ka inye ọkụ ọkụ fotovoltaic na netwọkụ agwaetiti nke canopies maka ibugharị ndị njem n'okporo ụzọ; ihe okike nke netwok nke agwaetiti nke imeghari ihe maka ugbo ala eletrik ma obu meputa ulo ike nke fotovoltaic jikọtara ya na ugbo ehi.
Na Lanzarote wụnye ugbo ala ikuku ohuru, nwere ike nke 9,2 megawatts, nke dị na Teguise, Arrecife na San Bartolomé, osisi fotovoltaic na Maneje na ugbo ikuku na-eri onwe ya na Punta de los Vientos. Na mgbakwunye, a ga-arụ ọrụ n'ịbawanye arụmọrụ ike nke ọkụ ọha na eze na ịkwalite iji ihe mkpofu eme ihe dị ka isi iyi nke ume ọhụrụ.
Na Las Palmas, nke ya Kansụl na-ele anya na ịmepụta oru ngo nke ihe omuma ohuru ohuru na oru nke ikuku, fotovoltaic na ihe ndi ozo. Na mgbakwunye, a ga-ebu ụzọ mee ihe maka iji ngwa ọrụ ugbo na oke ohia, omume dị n'ọhịa nke ike hydraulic na ọrụ ike ikuku, ma ọ dị obere ma ọ bụ dị elu.
El Cabildo nke El Hierro ga-eme mmụba na ntanetị okporo ụzọ ma gbaa ndị na-agafe agafe na ndị na-agba ịnyịnya ígwè ume site na Atụmatụ agagharị na-adịgide adịgide. Nke a nwere ọtụtụ omume, dị ka mmelite nke okporo ụzọ Bentama, ihe okike nke uzo di iche-iche n’etiti uzo ma dozie uzo di n’akuku osimiri, uzo uzo ohuru ohuru, tinyere ndi ozo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ike imeghari ohuru » A ga-eji nde 228 nke Canary Islands Fdcan mee ihe na oru ngo 90
Spain laghachi na nzọ na ume ọhụrụ
Ojiji nke microalgae maka ikpochapu mmiri